Mety hisy fiovana ve ny didy avoakan'ny HCC?
lundi, 19 novembre 2018 20:21
Tsy maka ny toeran'ny HCC akory fa fanadihadiana araky ny tantara sy ny didy efa navoakan'ny HCC no atao.
Ny lalàna dia mametraka fa ny CENI no manangona ny PV rehetra, manao saisie ary mamoaka ny vokatra vonjy maika. Ny HCC kosa dia omen'ny lalàna 9 andro amoahany ny vokatra ofisialy tsy azo ivalozana, aorian'ny nandraisany ny vokatra avy amin'ny CENI.
Midika izany fa tsy mamerina manao saisie intsony ny HCC fa ny vokatra omen'ny CENI azy, izay aza adino fa nisy PV avy amin'ny SRMV, izay mpitsara vita fianihanana daholo no mitarika azy isaky ny Distrika. Ny HCC izany tsy hanebaka velively ireo mpitsara sy ny CENI ireo.
Etsy ankilany anefa dia feno fitoriana efa tonga ao amin'ny HCC, na avy amin'ny mpifidy, na avy amin'ireo Kandida maro. Na ireo mitarika aza dia nametraka fitoriana sy fitarainana avokoa.
Ao ny nangataka fandravana ny fifidianana, ao no nangataka disqualification, ao ny mangataka audit logiciel, ao no mangataka confrontation PV.
Raha toa ka tsy handrava ny fifidianana ny HCC, ary tsy hanao disqualification, dia ho raisiny tsirairay ireo BV nisy olana, na nisy nametraka fitoriana, dia zavatra roa ihany no azony atao eo, na fohanany ilay vokatry ny biraom-pifidianana, dia samy very izany ny vaton'ny kandida tsirairay, izany hoe mihena ny isam-bato. Na raha misy mihoatra ny isan'ny vato totalim-bato amin'ny isan'ny mpifidy, dia manao tirage au sort izy, hanalana ny vato mihoatra, ka ataony antsapaka ny vaton'ny kandida 36 izay analana.
Azon'ny HCC atao ny mampiantso ireo kandida, na solotenan'ny Kandida, na ny mpisolo vava azy hanazava am-pahibemaso ny fitoriana napetrany (Plaidoirie).
Ny lalàna dia raha mahita tsy mety ianao ao amin'ny BV iray, dia iny no ametrahanao fitoriana, dia ny HCC no mandray izay BV izay manamarina. Tsy misy resaka confrontation entre kandida izany. Fa ny PV omenao no ampitahain'ny HCC amin'ny azy. Talata 20 novambra 2018 amin'ny 12ora alina no fara-fandraisan'ny HCC ny fitoriana.
Ka na inona na inona izany ny fanapahana ho raisin'ny HCC, dia tsy hitombo lavitra ny isam-bato azon'ny Kandida tsirairay.
Ny fangatahana famerenana fanisana vato na confrontation, dia tsy tafiditra amin'ny asan'ny HCC, tany amin'ny CENI no tokony nanao izany. Tamin'ny tantaran'ny HCC 2002 dia nisy izay, vokatry ny accord politique tany Dakar, na dia tsy najaina tanteraka aza ilay accord, fa amin'izao ny lalàna tsy nametraka izay.
Azon'ny kandida atao kosa ny nametraka fitarainana isaky ny BV nahitany tsy mety na dia 10 000 BV aza, dia jeren'ny HCC tsirairay, fa raha angataka confrontation dia hivelan'ny lalàna izay.
Momba ny trucage logiciel, dia azo jerena sy mora hita izany. Ny résultat BV/BV efa navoakan'ny CENI. Mahakely finoana anefa izay, efa ketrina tokoa raha logiciel no entina angalaram-bato.
Aza adino fa tsy ny % no atao moyenne rehefa manao kaoty, ka hoe nandresy 60% na 70% amin'ny faritra ka raha ampiana 40% eto Tana dia hoe atao adisanina ny 60 - 70 - 40 ka hanome 170/3 ka hanome 56.66%. tsy mitovy ny isan'ny mpifidy, ka na nahazo 80% Faritany Antsiranana aza ianao, izay latsaky ny 300 000 ny olona nifidy tany, ka raha resy aty Atsimondrano sy Avaradrano dia resy ianao.
Koa dia mamerina hatrany, omano ny 2e tour fa aza lany andro mandefa olona milahatra eny amin'ny HCC na manao fanambarana sy fandrahonana sy fampitahorana ny HCC.
Raha ny fanapahana noraisin'ity HCC ity hatramin'izay, dia miezaka ny tsy handrava ny andrim-panjakana hatrany izy, miezaka ny hisian'ny fitoniana, ka ny fahitana azy, dia tombanana ny tsy hisian'ny disqualification, na fandravana fifidianana, fa dia ny fanamafisana ny vokatry ny CENI, ka ny 2e tour no fanapahan-kevitra mety ho raisiny.
Tsy misorona, fa basy atifi-kavana.